အချစ်က ဒဏ်ခတ်လိုက်ပြီ— | PoemsCorner
“ ဟင်—“ အံ့သြထိတ်လန့်စွာညည်းညူသံနဲ့အတူ ကျွန်မမျက်လုံးတွေပြာဝေသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်မျက်ရည်ပူတွေက အတားအဆီးမဲ့စွာစီးဆင်းလာသည်။ကျွန်မခန္ဒာကိုယ်သည် လေထဲမှ မြူမှုန်လေးလို ဖြစ်သွားသလို—-ရေစီးနဲ့မျောသွားတဲ့သစ်ရွက်ခြောက်လေးလို—ပေါ့ပါးသွားလိုက် လေးပင်လာလိုက်။ သေချာ တာကတော့ ကျွန်မဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေခြင်းပါ။
“ မောင့်” ဂေါ့ဖ် အိတ်ကိုသေချာပိတ်ကာ အပေါ်ထပ်ကအခန်းရှိရာ ချည့်နဲ့စွာလျှောက်မိသည်။ ကျွန်မ လက်ထဲမှ စာအုပ်ဖိုင်လေးကိုတော့ယူလာခဲ့မိသည်။ဒါဟာ သူများကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုစပ်စုမိသည့် မဟာအမှားမှန်း သိပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျွန်မဒီလိုခံစားလိုက်ရသည်ထင်။သို့ပေမဲ့ တခြားလူမှမဟုတ်တာ ။ “မောင်” ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်း ဆယ်နှစ်တာပေါင်းသင်းလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့အချစ်ဦး ကျွန်မရဲ့ချစ်ခင်ပွန်းပေပဲလေ။ဒါဆိုကျွန်မလုပ်ရပ်ကို လွန်သည်ဟုမဆိုသာပါ။စာအုပ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ သာမာန်ရည်းစားစာတွေသာ။ရည်းစားများခဲ့သော ကျွန်မရဲ့ မောင်။ ဒါကိုသိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးစာရွက်တွေမှ စာတွေကြောင့် ကျွန်မထိန့်လန့်ခဲ့ရခြင်းပါ။
ဒီစာကို ကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ “ခ” ဟာ ကိုနဲ့ဝေးတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ—-ဒါဟာလည်း ကို့ ကို မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြွင်းမဲ့ယုံစေချင်တယ်—-“မေဦးသာ” ကသာ ကိုနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး အသင့်တော်ဆုံး မိန်းကလေးပါ—–ကို့မိဘတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပါနော်—–ဘ၀ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ “ခ” ဟာ ကို့မိဘတွေမျက်လုံးထဲမှာတော့ဘယ်အဆင်ပြေနိုင်မလဲနော်—–ပြီးတော့ “ခ” မှာလည်း ကို့ရင်သွေးကိုလွယ်နိုင် တဲ့ ပါရမီကို လောကကြီးကထည့်မပေးလိုက်ဘူးကို—–စကားလုံးအလှလေးတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်တော့ “ခ”ဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်တဲ့သူပါ—
“ခ” မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ ကိုအချစ်တွေကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆို မတရားရာ ကျမလားဟင်—ကို့ရဲ့အချစ်တွေကို ခဆီပေးလိုက်တယ်လို့ကိုပြောခဲ့တာနော်—-ဒီတော့ ကိုနဲ့အရင်လိုပဲနေကြရ အောင်နော်—-“ ကျွန်မစာကိုဆက်ဖတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါချေ။ရက်စွဲ—ရက်စွဲကလည်း ကျွန်မနဲ့မောင်လက်မထက်ခင် ၃လအလိုမှာ။အို!!!!ဒါဆို—–
ရုတ်ချည်းလှုပ်သွားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အကျီင်္အောက်က ဗိုက်ပူပူလေးကိုကိုင်တွယ်မိလိုက်တယ်။သားလေး— သားလေးရေ မေမေတော့—။ကျွန်မ သားလေးကိုပြောမဲ့စကားတွေကိုဆွံအစေလိုက်သည်။နားလည်နိုင်စွမ်းသာရှိခဲ့ရင် ကျွန်မသားရဲ့အသည်းနုနုလေးမှာ ဒဏ်ရာရသွားမှာလေ—။သားလေးကလည်း ကျွန်မစိတ်ကိုဖတ်မိနေတာလားမသိ။ တစ်ချက်သာလှုပ်ပြီး ငြိမ်ကျသွားသည်။အလိုက်သိတတ်လိုက်တာ—။
“ မေ—ညစာစားရအောင်လေ လာ” မောင့်စကားကိုလျစ်လျူရှုပစ်လိုက်သည်။လက်ထဲမှစာအုပ်ကိုလည်း ဖွက် ထားလိုက်သည်။ကျွန်မခံစားတာသူမသိစေရ။ကျွန်မလှဲအိပ်ပစ်လိုက်သည်။မောင်က
“ အေးလေ ညနေကမှ မေနွားနို့တွေသောက်ထားတာပဲ—အိပ်လိုက်ပါမေ ခဏနေဆေးသောက်ချိန်ကြ မောင် လာနှိုးပါ့မယ်” အရင်ကကျွန်မတပ်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နူးညံ့တဲ့ မောင့်အသံတွေဟာအခုတော့ ကျွန်မနားမှာခါးသက်လွန်းသလို ။ အခန်းတံခါးကိုညင်သာစွာပိတ်သွားပြီး အောက်ဆင်းသွားသောခြေသံများကြားလိုက်ရသည်။ ဘုရား—ဘုရား။ ကျွန်မ ပါးပြင်ပေါ်မှာအပူစီးကြောင်းတွေ။ငိုပြန်ပြီ ။ ငိုမိပြန်ပြီလေ။
ဒီလိုမောင့်ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို ဟို ခ ဆိုသောအမျိုးသမီးလည်းကြွေမိမှာပါပဲ။မနာလိုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း စိတ်ထဲကတော့မျက်ခနဲ။တကယ်တော့ကျွန်မမှာ အဲလောက်မနာလိုစိတ်မရှိခဲ့တာမောင်လည်းသိပါသည်။ရည်းစားတွေ ထည်လဲတွေသောမောင့်ကို မိဘတွေသဘောတူရုံဖြင့်ယူခဲ့ရုံမဟုတ်ပါ။နှလုံးသားမှလာသောမေတ္တာတွေကြောင့်လည်း လက်ခံခဲ့ခြင်းပါ။လက်ထပ်ပြီးမှ မောင့်ရည်းစားဟောင်းတွေလမ်းမှာတွေ့လျှင် မောင် အနေကျပ်မည်စိုးကာ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လမ်းဖွင့်ကာနှုတ်ဆက်ခိုင်းမြဲပါ။မောင်ကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသာ နံပါတ်ဘယ်လောက်ထင်တယ်လို့ပြောရင်း သာ။ကျွန်မကလည်း စနောက်မြဲ။ရည်းစားစာတွေထားနေကျဖြစ်တဲ့ သေတ္တာဟောင်းကိုလည်းမွှေကာ မောင်နဲ့အတူ ထိုစာတွေဖတ်ကာ စမြဲ နောက်မြဲ။သို့ပေမဲ့ စာအုပ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်ကွဲထွက်နေသော မောင့် ဂေါ့ဖ်အိတ်ထဲက—။
ဒါဆို ခ ဆိုတာ မောင့်ရဲ့အချစ်—။အချစ်ဦးပေါ့။ပြီးတော့ ခ ရဲ့စကားကြောင့်သာ ကျွန်မကို—။အခုဆို ခ ပြန် ရောက်နေပြီဆိုတာသေချာသည်။မောင်က တစ်ပတ်ကို ၁ရက်ဖြစ်စေ ၁လကို ၃ရက်လောက်ခရီးသွားမြဲ။(ဟန်ဆောင် ခရီးဖြစ်မှာပါ) ။ကျွန်မကွယ်ရာမှာ ကျွန်မကိုအရူးလုပ်နေမှာသေချာပါသည်။
“မေကသိပ်လိမ္မာတာ ခ—ကို့ကိုလည်းရိုသေတယ် —ချစ်လည်းချစ်ရှာတယ်—-ပြီးတော့ ဒေါ်စုတို့ရှိရက်နဲ့ တောင် ကိုအတွက်ဟင်းကို မေကိုယ်တိုင်ချက်တာ”
“ ဒီလောက်ထိပဲရပ်ထားကို ခမှာမရှိတဲ့အရာတွေကို မေ့မှာရှိမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကို ခ ကကို့ရဲ့အချစ်ဆုံးဆိုတာ” ပြောနေဆိုနေလိမ့်မည်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရင်ခွင်ချင်းအပ်ကာပြောနေမည်ဆိုတာသေချာသလောက်။အဲဒီ့ စကားတွေထဲမှာ “ မေဦးသာ”ဆိုတဲ့ကျွန်မဟာ အရုပ်လေးတစ်ခုသာသာ။ရိုင်းရိုင်းပြောရလျှင် ကလေးမွေးပေးမဲ့စက်ရုပ် တစ်ခုသာ။အော်—-ရက်စက်လိုက်တာမောင်ရယ်။
ကလေးမချစ်တတ်သောကျွန်မဟာအိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်ခန့်မှ မောင့်ကိုချစ်တာတစ်ခုနဲ့တင် သားလေး ကိုလွယ်ခဲ့ခြင်းပါ။
“မောင်တို့သားလေးအတွက်—-သားလေးကြီးလာရင်—-“စီမံကိန်းတွေဆွဲကာ ပျော်ခဲ့သော မောင့်ကို ကျွန်မ မျက်ရည်ထဲမှမြင်ယောင်လာသည်။အော်—မောင်ချစ်တာ ကျွန်မမှမဟုတ်ဘဲ။ဒါဆိုရူးရူးမူးမူးနဲ့ ကျွန်မကိုချစ်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ မောင်ဟာ—–ကျွန်မကိုမချစ်ခဲ့တာအသေအချာ။မောင်ချစ်တာ ကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု၊ ရိုသေသမှု၊ မိန်းမသားဆန်မှု——-။အကောင်အထည်မရှိတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေကိုမောင်ချစ်ခဲ့တာ။တကယ်ရက်စက်ပါလား!!
ဒါဆိုကျွန်မ ဒီသားလေးကို—-။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်မွေးပေးရမလိုဖြစ်တဲ့သားလေးကို—။မိခင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မမတွေးရဲသလို။မလုပ်လည်းမလုပ်သာပါ။ကျွန်မမုန်းတဲ့သူတို့အတွက် အပြစ်မရှိတဲ့သားလေးကိုအပြစ်မပေးရက် ပါ။ဒါဆိုမွေးဖွားပြီးအဝေးပို့ပစ်လိုက်လျှင်—-။မဖြစ်နိုင်ပါ။အတ္တကြီးတဲ့မောင်ဟာ သားကိုဒီလိုအလုပ်ခံမည်မဟုတ်။ ဒါဆို——။ကျွန်မမတွေးကောင်းတာတွေတွေးမိနေပြန်သည်။
“ ပြောပါမေ—မေအခုလိုတစ်ဖက်သက်စိတ်ဆိုးနေတာ—မဟုတ်သေးဘူးလေ မောင့်ကိုပြောပြမှ မောင်ဖြေရှင်း နိုင်မှာပေါ့—မေ” ကျွန်မလက်ကိုဖွဖွကိုင်ကာ ကျွန်မမျက်နှာကိုကြည့်နေတဲ့မောင်။ကျွန်မလက်ကို ဆတ်ခနဲ မောင့်လက်ထဲမှဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဘာမှမပြောချင်လောက်အောင် ကျွန်မရင်ထဲကအသည်းတွေကွဲနေတာ မောင် မသိ။ ကျွန်မ မောင်နဲ့စကားမပြောဘဲ ခပ်စိမ်းစိမ်းနေလာသည်မှာ တစ်လကျော်ပြီ။
“ ဟော—ငိုပြန်ပြီ—ကိုယ်ပြောပြမယ်မေ —ကိုယ်တို့ဟာအိမ်ထောင်သည်တွေလေ—အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မှုတွေလိုတယ်မေ—-အခုလိုမေ” စကားတွေကို ကျွန်မကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်။ နူးညံ့ ချိုသာတဲ့ မောင့်အသံတွေကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတာလည်းပါလိမ့်မည်။ဒီလိုသာ ဆက်တိုက်ချော့နေလျှင် ကျွန်မ — ကျွန်မအရည်ပျော်ကာ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာစိုးသည်။သည်တော့
“ ထွက်သွားပါ ရှင်ထွက်သွားပါ ကျွန်မရှင်နဲ့တစ်ခန်းထဲမှာမနေနိုင်ဘူး” နင့်နင့်သီးသီးအော်လိုက်မိသည်။ ပါးပေါ်မှာလည်း မျက်ရည်တွေနဲ့။မောင်နားမလည်စွာ ကျွန်မကိုကြည့်သည်။ပြီးတော့ ကျွန်မပခုံးလေးကိုသိုင်းဖက် လိုက်သည်။ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ အောင့်သွားသည်။မချစ်ဘဲနဲ့များ——ခ ဆိုတဲ့မိန်းမအတွက် သားအတွက် နဲ့များ ဟု စိတ်ကထောင်းခနဲဒေါသထွက်ကာ
“ဖြန်း” ကျွန်မလက်ဝါးတောင် တော်တော်နာသွားလျှင် —-မောင့်ပါး—မောင်။ကျွန်မနောင်တရမိသလို။ဒါပေမဲ့ စာလုံးတွေကိုပြန်မြင်လာတော့လည်း ကျွန်မရင်ထဲနာလာပြန်သည်။
“ တောက် မင်း— မင်းကွာ” မထင်မှတ်သည်မို့ တစ်ပတ်လည်သွားသောမောင်။ ကျွန်မရိုက်ချက်ကြောင့် နီမြန်းသွားသောပါးကို အုပ်ကာ ထွက်သွားသည်။ခြေသံတွေကပြင်းလိုက်တာ။ကားသံကြားလိုက်ရသည်။သေချာပါ သည်။ဒါဟာ “ခ”ဆီသို့သာ။ကျွန်မမျက်လုံးတွေပြာလာရပြန်သည်။ဒေါ်စုအကူအညီဖြင့်အိပ်ယာထဲလှဲလိုက်မိသော် လည်းစိတ်တွေက —–။
“ ဒီနေ့ဆေးခန်းသွားမယ့်ရက်နော်—ညနေအဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်” အမိန့်သံမဟုတ်သော်လည်း နူးညံ့မနေမှန်းကျွန်မသိသည်။အခုဆို သားလေးကိုယ်ဝန်က ၉လ။ မောင်နဲ့ ကျွန်မစကားမပြောတာ ၂လ။သို့ပေမဲ့ မောင်က မောင့်သားအတွက်ကျချွင်းခြက်ထားထားသလို။ကလေးနဲ့ပတ်သက်လျှင် ဆေးခန်းဆို အချိန်မှန်ပင်။ဆေး ဆိုလည်း ဒေါ်စုနဲ့အသေအချာတိုက်ခိုင်းသည်။ဒါတွေဖြစ်လေ ကျွန်မစိတ်တိုလေပါ။—-သားကိုမနာလိုမဖြစ်မိသော် လည်း ခ နဲ့မောင်အတွက် ကျွန်မသားက—-။အို!!!!ရင်ထဲမှာ တဆစ်ဆစ်နဲ့နာကျင်လာပြန်သည်။
ဆေးခန်းကပြန်လာတော့ ဆေးဘူးတွေယူကာ ကိုယ့်အခန်းကိုတက်လာလိုက်မိသည်။လှေကားကိုခြေဆောင့် နင်းမိတာ နောက်မှ မောင်ကြည့်နေမှန်းသိလို့—-တကယ်တော့ မိန်းမသားတွေဟာ စိတ်အဆိုးလွယ်ပေမဲ့ အကြာကြီး စိတ်မဆိုးနိုင်သူတွေပါမောင်ရယ်——။
အခန်းထဲရောက်တော့ဆေးဘူးတွေသိမ်းရန်အံဆွဲဖွင့်မိတော့—-။စာအုပ်—-ဟိုစာအုပ်။ရင်ထဲကကျင်တက်လာ ပြန်သည်။နောက်တော့ ဝေဒနာအသစ်ပြန်ဖြစ်ကာ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့လက်ထဲမှဆေးဘူးတွေရောအဲဒီ့စာအုပ်ရော စားပွဲပေါ်တင်ထား တဲ့ပန်းအိုးကိုပါရိုက်ခွဲလိုက်သည်။ ဒုန်း ဒုန်း ခြေသံပြင်းပြင်းနဲ့တက်လာသူကိုမေးစရာမလိုပါ။မောင်။ ကျွန်မကိုတစ်ချက် ကြည့် ကာ ပြန်ထွက်သွားသည်။ရက်စက်လိုက်တာနော်—-။
အား—-။ကျွန်မခေါင်းထဲမူးဝေလာသည်။အသံတစ်ခု။တံစက်မြိတ်မှ ရေကျသံလို။ရေအိုးစင်မှ ရေကျသံလို။ အိုး ကျွန်မကုတင်မှ အောက်သို့ ကျနေသည့်အသံ—-။ကျွန်မခန္ဒာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလည်းရွှဲလို့။ဘုရား ဘုရား။ တစ်ကိုယ်လုံးနုံးခွေနေသည်မို့ထလို့လည်းမရ။မောင်—-တိုးတိုးလား ကျယ်ကျယ်လားတော့မသိ ကျွန်မအော်ခေါ်မိ လိုက်သည်က “ မောင်”
ကျွန်မမျက်စိပွင့်လာတော့ အဖြူရောင်မျက်နှာကျက်ကိုမြင်ရသည်။အိမ်မှာ—-အိမ်က မျက်နှာကြက်က အညိုရောင်ပါ။ဒါဆို—အနံ့ ဒါဟာ—ဆေးရုံနံ့ပါ။(ပိုးသတ်ဆေးနံ့)
“ နိုးလာပြီလားသမီး” မေမေ။ကျွန်မရဲ့မေမေ။မေမေမျက်နှာအတော်ပင်မကောင်းပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားမှုမကောင်း။
“ ကလေး—အို သားရော” အခန်းဝမှ ကျွန်မဆီသို့တိုးတိုးလာနေတဲ့ မောင်။ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ မျက်ခုံးထူထူ တွေရဲ့အောက်က ရီဝေေ၀အကြည့်တွေပါတဲ့မောင့် မျက်ဝန်းတွေက ဒီနေ့ခြောက်ကပ်လွန်းနေသည်။ နှုတ်ခမ်း ရဲရဲ တွေကလည်း ဖြူဖတ်နေသည်။ အမြဲလှိုက်လှဲတတ်တဲ့ မောင့်မျက်နှာက—–။
“ မေ နိုးလာပြီလား” ကျွန်မလက်လေးကိုဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်လာသည်။မေမေနဲ့ မောင့်မေမေလည်းအခန်းပြင် ကိုနုံးချည့်စွာထွက်ခွာသွားသည်။
“ သားရော သားရော မောင်” အားကိုးတကြီးမေးမိနေသည်က ကျွန်မပါ။ရုတ်တရက် မောင်မဖြေပါ။ကြည့် ရတာ စကားလုံးရှာနေပုံ။
“ မောင့်အပြစ်ပါ မေ—–မေ ခံစားနေရတာကို မောင်နားမလည်ခဲ့တာ ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာ—“ ကျွန်မလက်ဖမိုး ကို မောင့်နဖူးနဲ့ထိအောင်ဆွဲကပ်လိုက်သည်။အို—ကျွန်မစိတ်မရှည်ပါတော့။
“ပျက်ကျသွားတယ် မေ —-သားအိမ်ပါကွဲသွားတော့—သားအိမ်ပါထုတ်လိုက်ရတယ် မေ” ရုတ်တရက်ဖြေချလိုက်ပြန်သည်က မောင်။ကျွန်မအသိစိတ်တွေလွင့်ကာ ခါးကနာကျင်မှု၊ ၀မ်းဗိုက်နာကျင်မှုတို့ကိုကျော်လွန်ကာ ထထိုင်လိုက်မိသည်။မောင်က ကျွန်မကိုထိန်းလိုက်သည်။ ကျွန်မအသိပြန်ဝင်လာတော့ —-။
“ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြတ်စဲလိုက်ရအောင် ကိုနေ၀န်းညီ” အသံကအေးဆေးစွာပင်။ဘာကြောင့် ရယ်မသိ —–စူးနစ်သောအကြည့်နဲ့ ကျွန်မကို မောင်ကြည့်နေသည်။ကျွန်မစကားမမှားမှန်းသိသည်။ကလေးလိုချင် သည့်သူကိုမပေးနိုင်မှတော့ ဒီလူနဲ့ဘာအတွက်ဆက်ပေါင်းနေမည်နည်း။သူ့ဘာသူ ချစ်တဲ့ ခ ဆီသာ။
“ ဘာလို့ပြတ်စဲရမှာလဲမေ—ကိုယ်ချစ်လို့ မြတ်နိုးလို့ရယူထားတဲ့ မေ့ကို ဘာအတွက်ပြတ်စဲရမှာလဲ— မောင်သေတဲ့အထိ မေဟာ မောင့်ဇနီးပဲဖြစ်ရမယ်” အမိန့်သံဖြစ်သော်လည်း နူးညံ့ညင်သာမှု နာကျင်ကြေကွဲမှုအသံ တွေစွက်နေသည့် မောင့်အသံ။ဒီတစ်ခါအံ့သြ၀မ်းနည်းကာ ငိုလိုက်ရသူက ကျွန်မ။ဘယ်လောက်ငိုနေမိသည်မသိ။ မောင်အကျီင်္တွေပင် ကျွန်မမျက်ရည်တွေအတော်ရွှဲနေပြီ။
“ ဖြစ်ရလေ မေရယ်—-“ ကျွန်မနဖူးပေါ်ကိုမောင့် အနမ်းလေးကျရောက်လာသည်။အို—မောင့်ပါးပြင်မှာလည်း အပူစီးကြောင်းတစ်ခု။ကျွန်မမော့ကြည့်လိုက်တော့ မောင့်မျက်ရည်တစ်ပေါက် ကျွန်မပါးပေါ်ကိုခုန်ကျလာကာ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းသွားသည်။
မောင့် ရဲ့ဂရုဏာအပြုံးနဲ့ ရည်လဲ့တဲ့အကြင်နာမျက်ဝန်းကို မြင်လိုက်ရသည်။အော်—မောင့်ရဲ့ကြီးမာတဲ့ မေတ္တာနဲ့ စေတနာ နဲ့အချစ်တွေကိုစော်ကားမိတဲ့ ကျွန်မဟာ—————အချစ်ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုခါးသီးစွာခံလိုက် ရပြီဆိုတာ———xxxxxxxx။
ကျွန်မမေမေရဲ့စုံစမ်းမှု——(“ခ” ဟာ မောင့်နံပါတ်စဉ်တစ်ခု—-မောင့်ကိုရူးသွပ်စွာချစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မလိုမိန်းမသားတစ်ဦး—မောင်နဲ့ ကျွန်မ လက်ထပ်တဲ့နေ့ကပဲ အိပ်ဆေးသောက်ကာဘ၀ကိုအဆုံးသတ်သွားသူပါ—–သေလူတစ်ဦးကိုမှ မကောင်းမြင်ခဲ့သော ကျွန်မလည်း)
(စာရေးဆရာမ ဂျူးရဲ့ အက်ဆစ်တစ်ခွက်ကို မှီးသည်)
In: ဝတ္ထု Posted By: mayviolet Date: Nov 5, 2012
Leave comment 1 Comment & 1,161 views